Zavatra tsara indrindra hatao ao an-trano ho an'ny mpandeha rehefa mikatona ny sisin-tany
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Zavatra tsara indrindra hatao ao an-trano ho an'ny mpandeha rehefa mikatona ny sisin-tany
Ny areti-mifindra coronavirus dia tonga miaraka amin'ny fanamby sy fameperana maro, indrindra ho an'ireo mpandeha. Na dia misy aza ny fameperana any amin'ny fanjakana maro, ny fitsangantsanganana any amin'ny ankamaroan'ny firenena dia mbola tsy ao anaty menio, satria mikatona hatrany ny sisintany. Na dia ilaina aza ny mijanona ao an-trano sy manao fanazaran-tena amin'ny halavirana ara-tsosialy mba hanasongadinana ny fiolahana, saika ny olona rehetra dia manana fotoana malalaka be.
Raha mitady zavatra hitazomana ny tenanao ianao ankoatry ny filma mahazatra sy ny fanarahana ny zava-mitranga dia ireto misy hevitra mahafinaritra momba ny zavatra tokony hatao ao an-trano.
Manomana fetr'andro iray
Satria tsy afaka mivoaka ho an'ny fialantsasatra na fialantsasatra ianao noho ny famerana dia tsy midika izany fa laninao ao an-trano mankaleo ianao. Azonao atao ny manomana toeram-pijanonana any an-trano miaraka amin'ny ankohonanao sy ny zanakao ary mifalifaly.
Ny fialan-tsasatra dia fialantsasatra fandanianao any amin'ny firenenao na amin'ny fitsidihanao an-trano toerana manintona mpizahatany eo an-toerana. Saingy, satria mbola mety hikatona ny tranombakoka sasany na ny manintona eo an-toerana, dia afaka manomana zavatra any an-tokontany ianao. Barbecue miaraka amin'ny ankohonana, na afaka manandrana mitoby any an-tokotany ianao ary mitantara tantara, mihinana sy misotro.
Vaovao farany ny lisitry ny siny ary tahirizo ao anaty DVD ny sasany amin'ireo fahatsiarovanao momba ny dia taloha
Miaraka amin'ny fotoana malalaka be eny am-pelatananao dia azonao atao ihany koa ny manavao ny lisitry ny siny ary manomana ny toerana manaraka tianao hotsidihina. Hanamora anao io raha vantany vao esorina ny fameperana ary hisokatra ny sisin-tany, ary azo antoka ny fivezivezena indray.
Mandritra ny an-trano dia afaka mijery horonantsary taloha tamin'ny fitsangatsanganana nataonao taloha ianao ary mankafy fotoana tsara miaraka amin'ny fianakavianao. Hamarino tsara fa mahita fotoana ianao ary handamina ireo rakitra fampitam-baovao teo aloha miaraka amin'ny tantaram-pitetezanao. Sivano izy ireo ary ampiasao rindrambaiko mandoro hamindra azy ireo avy amin'ny PC-nao mankany amin'ny DVD hitahiry tahiry PC.
Mianara fiteny vaovao
Ankehitriny mihoatra ny hatramin'izay no fotoana mety indrindra hampihenana ny fahaizanao miteny vahiny. Misaotra ny World Wide Web, loharanom-pahalalana be dia be amin'ny Internet izay ahafahanao mianatra fiteny vaovao avy amin'ny rangotra na hamafiso ny fahaizanao miteny faharoa. Ny safidy dia maro, avy amin'ny sarimihetsika, fampiharana, podcast, ary fampianarana an-tserasera maimaim-poana. Azonao atao ny mahita ilay fiteny tianao hianarana ary mitsitsy ora vitsivitsy amin'ny fotoanao isan'andro mba hahatonga azy io ho tonga lafatra. Ahoana tokoa izany rehefa amin'ny fialan-tsasatrao manaraka hanafatra zava-pisotro tianao na hifaneraserana amin'ireo mponina ao amin'ny fitenin-drazany?
Mikaroha toeran-kafa vaovao amin'ny fitsangatsanganana virtoaly
Amin'ny fitsangatsanganana mbola eo am-pijanonana, fotoana izao handraisana fomba vaovao hizaha izao tontolo izao amin'ny fampiasana fitsangatsanganana virtoaly. Misaotra tamin'ny Internet, afaka mandeha amin'izay tianao ianao, tsy misy pasipaoro daholo. Betsaka ny toerana itodiana virtoaly hita amin'ny Internet azonao zahana amin'ny solosainanao, kitiho ary ankafizo.
Raha manan-janaka aman-janaka ianao dia ataovy izay hahafinaritra azy kokoa amin'ny alàlan'ny fanomanana zava-pisotro sy sakafo eo an-toerana avy any amin'ireo faritra hotsidihinao. Azonao atao ny mahazo ny sasany amin'ireo fomba fahandro isan-karazany amin'ny Internet na manafatra avy amin'ny trano fisakafoanana manomana nahandro avy any amin'ny firenen-kafa.
Miaraka amin'ireo torohevitra tena tsara etsy ambony, dia hanana fotoana mahafinaritra hijanonana ao an-trano ianao mandritra ireo fotoana tsy azo antoka ireo. Tadidio fa ny fihetsika manao ny tsara indrindra amin'ny zavatra anananao sy ny toe-tsaina tsara no resahina.
Qatar Airways dia manamafy ny sidina Lagos
Faly ny fizahan-tany India amin'ny fanampiana ny governemanta amin'ny ...